SingleCare inoshanda neMedare? Kunzwisisa mabhenefiti ako - Kambani | Chikunguru 2021
Wellness Nhau Kambani, Info Info Kambani, Hutano Dzidzo Nharaunda, Wellness Hutano Dzidzo, Nhau Hutano Dzidzo, Hutano Zvinodhaka Info Nhau, Wellness Kambani, Iyo Checkout Dzidzo Yehutano Zvipfuwo Kambani, Nhau Nharaunda, Kambani Hutano Dzidzo, Zvipfuwo
Kuru >> Kambani >> Ndinogona here kushandisa SingleCare kana ndiri paMedicare?
Kambani Bvunzai Imwe Care
PaSingleCare, isu tinotenda kuti iwe unofanirwa kuwana mutengo wakanakisa wepiritsi yako, zvisinei nekuti inishuwarenzi ipi. Zvichireva, iwe unogona kushandisa iyo SingleCare kemesi yekuchengetedza kadhi kuti udzikise mitengo pane yako mareferenzi kunyangwe iwe uchikodzera iwo Medicare mabhenefiti. Hazvisi zvisiri pamutemo, kana zvinopesana nemitemo.
SingleCare inogona kukubatsira kuchengetedza kusvika pamakumi masere muzana pamishonga yekunyorerwa- kudzikisa mutengo wemishonga pakurhoja. Zvese iwe zvunofanirwa kuita kusaina (mahara!) Pa webhusaiti yedu . Unogona kunyorera iwe Rx kadhi kana kuriprinta nekukasira. (Iwe uchagashira kadhi mune tsamba mukati memasvondo matatu kana mana kana ukakumbirwa.) Ungave uchitumira mameseji, kuprinta, kana kumirira iro rakaomarara kopi, unogona kushandisa ese matatu maresitoreti ku pharmacy.
Nguva yekufunga kushandisa SingleCare uye Medicare
Kune vanhu vanokodzera Medicare, SingleCare inogona kubatsira kudzora mari yemutero nenzira dzinotevera, ungave kana usina chirongwa chekunyorera.
Kana usina chirongwa chemushonga ...
Medicare Chikamu D isarudzo yekusarudzika. Pamwe pawakatanga kunyoresa, wakafunga kuti haudi kuwedzerwa zvinodhaka, asi iwe uchimbopota uchizadza mushonga. SingleCare inogona kukubatsira kuchengetedza mitengo yakaderera.
1. Kuenzanisa mitengo pamitemo yako.
Unogona kushandisa singlecare.com kuenzanisa iyo pharmacy ine mitengo yakaderera kwazvo. Tsvaga nzvimbo yako, wobva wanyora muzita rako rekunyora. Iwe uchaona akasiyana ma pharmacies uye nemitengo yakadzikiswa yemitengo. Iwe unofanirwa kuenzanisa mitengo yedu neyekunze-kwehomwe (kana mari) mutengo wemushonga.
2. Kuti udzikise mutengo wemishonga kana usina chinyorwa chekunyorera.
Unogona kushandisa SingleCare kuchengetedza mitengo yakaderera kumafarasi makuru anosanganisira CVS, Walmart, Walgreens, Albertsons, Kroger, Target, Longs Zvinodhaka, Duane Reade, uye zvimwe zvakawanda. Paunenge iwe wawana iyo isinganyanye kudhura, uya nekadhi rako rekuchengetedza mari kukhemisi (kana kutumira koponi kufoni yako), uye bvunza nyanzvi yemishonga kuti ishandise kana uchiongorora.
maitiro ekubvisa hutachiona hwehutachiona
Kana uine Medicare Chikamu D…
SingleCare inogona kudzikira kunze-kwe-muhomwe mari kana iwe uri (kana uchisvika) iyo Medicare yekuvhara mukaha kana pane yakatarwa mari.
3. Kana singleCare mitengo yakaderera pane yako copay.
Kunyangwe iwe uine chinyorwa chekunyorera neMedare Chikamu D, iyo YegaCare mutengo wemushonga unogona kunge wakaderera pane yako Medicare copay. Iwe unogona kukumbira wemishonga kuti ashandise yako ImweCare Rx kadhi kana uchitarisa kunze panzvimbo.
4. Kana mushonga usina kuvharwa neMedicare.
Kana, iwe ungangoda mushonga uyo wako Medicare tsamba yemubatsiro mabhenefiti haavhare-senge Viagra , phentermine , kana Propecia . SingleCare inogona kukubatsira kudzikisa mutengo.
5. Paunenge uri mugomba reMedicare donut.
Iwe unogona kumhanyira muchikamu chekuvhara, chinonziwo Medicare donut hole, mushure mekunge iwe washandisa imwe huwandu hwemari pamishonga yakavharidzirwa. Mushure mekurova mari yakatarwa- $ 3,820 muna2019 - unova nebasa rekubhadhara makumi maviri neshanu muzana emitengo yemazita ezita rezita, uye makumi matatu neshanu ezviuru zvemagetsi kusvika iwe uchirova mari yako yegore rose yekubuda muhomwe.
Izvi zvinoreva kuti, iwe paunenge uri mugomba redonut, yako mari yekunyorera inogona kukwira kumusoro. Nemari shoma, haudi kusarudza pakati pemishonga nezvimwe zvinodiwa. Kana iwe uchinetseka kutenga mushonga, zvinogona kuita zvine musoro kushandisa SingleCare kudzikisa mutengo.
Unogona SingleCare kushandiswa neMedare?
Izvo zvakakosha kuti uzive: Paunoshandisa yako SingleCare kadhi, iyo pharmacy inoitisa iyo pachinzvimbo Kadhi rako reMedare, kwete pamwe chete nekadhi rako reMedare. Ngatiti iwe une $ 100 copay yemushonga neMedicare, uye mutengo weSingleCare i $ 5 chete. Iye wemishonga anogona kushandisa iyo SingleCare kadhi kuti akupe iwe yakaderera mutengo. Asi, kana iwe ukaita izvi, hazvingatarise kune yako yekunze-kwehomwe yakanyanya. Mune mamwe mazwi, zvinoita kuti tsamba yako ishandiswe zvakanyanya kudhura, asi hazvizokubatsire kuti ubude mukuvhara giraidhi nekukurumidza kana kusangana neyako yaunobvisa.
Kufungisisa kuti chii chiri kubata? Hapana kana! SingleCare vadyidzani zvakananga nema pharmacy, izvo zvinoita kuti tikupei yakaderera mitengo. Isu tinogamuchira mari diki kubva kune vatinoshanda navo vefamasi kana iwe ukashandisa kadhi rako reSingleCare kuchengetedza, ndiyo nzira yatinogona kukupa sevhisi kwauri mahara. Pharmacies anosarudza kuita bhizinesi nesu nekuti tinochengeta maitiro edu ebhizinesi pachena, mitengo yedu inowirirana, uye isu tinobatsira kuunza vatengi kukhemisi yavo.
sei kuwana insulin pombi mahara
Kana iwe uine chero mimwe mibvunzo, inzwa wakasununguka kutifonera pa1-844-234-3057 kana kuti uwane isu pairi Facebook .
Chirwere ichi chiri mumhepo here? Dzidza kuti furu inopararira sei.
Generic mishonga ichangobva kuwanikwa mu2019
ndinogona kutora ibuprofen uye acetaminophen pamwechete
ndeye zantac ppi kana h2 blocker
zoloft uye xanax panguva imwe chete
inobatsira l-arginine kubatsira naed
rudzi rweropa rako runotii nezvehunhu hwako
yakawanda sei ibuprofen yandinogona kutora kamwechete